5 qasaaro galmo oo lala yeesho nin gus weyn leh - SANTE PLUS MAG - TELES RELAY
5 qasaaro galmo oo lala yeesho nin guska weyn - SANTE PLUS MAG
In kastoo badankood aaminsan yihiin in guska weyn uu ku xirnaado inuu yahay mid xiiso leh, haweenka qaarkood waxay yiraahdaan tan ka soo horjeedda. Xaqiiqdii, cabbiraadaha soo raaca waxay sababi karaan xanuun waxayna wiiqayaan raaxada la dareemay inta lagu gudajiray ficilka galmada. Waxaan markaa u nimid inaan la yaabno haddii cabirka galmada wuxuu muhiim u yahay galmada oo dhameystiran. Xaqiiqdii, waxay umuuqataa in guska weyn uu sababi karo dhib badan.
1. Xanuun xiliga galmada
Guska weyn markasta dammaanad kama qaado galmo weyn. Xigasho: Male.com
Dabeecaddu waxay ahayd mid deeqsi la leh gacaliyahaaga laakiin waxaad dhibaato ku qabtaa inaad gaarto kartidaada galmada? Waxay u muuqataa in guska weyn uu kor u qaadi karo dyspareunia. Xaaladdan ayaa tilmaamaysa xanuunka la dareemo xilliga galmada. Sida laga soo xigtay mid waxbarasho waxaa daabacay BJORG: Joornaal Caalami ah oo ku saabsan Dhalmada iyo Haweenka, 7,5% haweenku waxay soo sheegaan inay sameeyeen galmo xanuun badan. Ka soo horjeedka waxa qofku u maleyn karo, waa haweenka da'da yar (16-24 sano jir) iyo sidoo kale haweenka jira 55 ilaa 64 sano, kuwaas oo la ildaran xanuunadan. Dhibaatadan waxaa sababi kara dhowr sababood oo ay tahay in la aqoonsado. Haddii gusku aad u weynaado oo saliiduhu aanu ku filnayn, kaabashadu waxay dhib dhab ah u noqon kartaa naagta.
2.Maseyrka ragga kale
Cabirka guska wuxuu saameyn ku yeelan karaa xiriirka ragga kale. Xigasho: Male.com
Ragga badani waxay u egyihiin inay isbarbar dhigaan ayna horumariyaan dhismayaal ku wareegsan cabirkooda guska. Inkasta oo dumarka qaar tixgeliyaan taas guska yar ayaa sahlaya qanacsanaanta galmada, khuraafaadka ah in xubin wax ku soo rogaya ay ka tarjumeyso awoodda nin ee ragga ayaa weli ku dhex jirta maskaxdeena.
3. Awood la'aanta in la qariyo kacsiga
Way adkaan kartaa in la daboolo kacsiga. Xigasho: Male.com
Ragga oo dhami waxay soo mareen kacsi lama filaan ah. Sidaa darteed, guska waxaa ku qulqulaya dhiig iyadoo aysan jirin wax kicin galmo ah. Badanaa, markay farsamadan dhacdo, nin celcelis ah ayaa dabooli kara. Laakiin haddii gusku weyn yahay, wey adkaan kartaa in la qariyo kacsigaan, gaar ahaan marka ninku ku jiro gaab ama surwaal ciriiri ah.
4.Naagta waxay noqon kartaa aamin la'aan
Haweeney xanuun dareento xilliga galmada waxay noqon kartaa aamin la'aan. Xigasho: Male.com
dhowr sababaha ay haweeneyda u noqon karto aamin la'aan. Sida laga soo xigtay a waxbarasho oo lagu daabacay joornaalka 'PLOS One', guska weyn wuxuu ka dhigi karaa haweeney inay khiyaameyso lamaanaheeda. Si loo gaaro gabagabadan, cilmi baarayaashu waxay wareysteen 545 lamaane isqaba oo ku nool Kenya. Dumarku waa inay muujiyaan cabirka guska lammaanahooda markay kacsanayaan. Marka waxay u egtahay taasi mar kasta oo uu guska dherer ahaado, ayay u badan tahay inay haweeneydu galmo la yeelato. Xaqiiqdii, waa cabsida in la waxyeello inta lagu guda jiro galmada taas oo u horseedi karta iyada khiyaano.
5.Halis ka timaada jabitaanka kondhomka
Kondhomku wuu jeexi karaa inta lagu jiro falka. Xigasho: Gyn & co
Haddii lammaanuhu leeyahay gus weyn, way ku adkaan kartaa iyaga inay helaan kondhom ku habboon iyaga. Nasiib darro, kondhom aad u adag ayaa jeexjeexi kara inta lagu jiro mudista waxayna sababaan cabsi iyo xishood. Sidaa darteed, waa lagama maarmaan in la hubiyo in la helo kondhom loo qaabeeyey qaabka iyo cabirka guska si looga fogaado halista uurka aan la rabin ama gudbinta cudurrada galmada.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.santeplusmag.com/5-inconvenients-de-faire-lamour-avec-un-homme-qui-a-un-grand-penis/
PSG: Romain Faivre ayaa qarxay, Paris oo fiirineysa! - CAGTA 01
"Iskuulka, waxaan ahaa mid xun, dhexdhexaad ah, cunsuriyad qas, cunug waxyeelo leh"